Actualidad Viajes သည် Actualidad ဘလော့ဂ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားကမ္ဘာ ခရီးသွားခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးနှင့်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ခရီးသွား about ည့်လမ်းညွှန်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အကြံဥာဏ်များကိုပေးအပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားစဉ်၎င်းသည်မူလနေရာများသို့ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်ကျွန်တော်တစ် ဦး ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် Podcast ခရီးသွားခြင်း သောအောင်မြင်ရန်အတော်လေးအရေးပါသောအောင်မြင်မှုရှိခဲ့ပါတယ် ဥရောပ Podcast ဆုပေးပွဲများတွင်ပထမနေရာ စီးပွားရေးကဏ္Spainတွင်စပိန်နှင့်ဥရောပ၌စတုတ္ထနေရာတွင်ရှိသည် ယခုနှစ် 2011 ၌တည်၏ အဖြစ်နှစ်များတွင်တစ် ဦး ဗိုလ်လုပွဲဖြစ်ခြင်း 2010 y 2013.
Actualidad Viajes အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားသည် အမျိုးမျိုးသောအသည်းအသန်ခရီးသွားများအတွက်နှင့် globetrotters သင့်အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတများကိုသင့်အားမျှဝေလိုသည့်အခါ။ ၎င်းသည်သင်လည်းပါ ၀ င်လိုပါကမတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် ဒီပုံစံကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးပါ.
ငါကလေးဘဝကတည်းကအခြားနေရာများ၊ ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်သူတို့၏လူများကိုသိလိုခဲ့သည်။ ငါခရီးသွားတုန်းကစကားလုံးများ၊ ရုပ်ပုံများနဲ့အတူထုတ်လွှင့်နိုင်ဖို့မှတ်စုများကိုယူပြီး၊ ထိုနေရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မည်မျှရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူမည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်သည်။ စာရေးခြင်းနှင့်ခရီးသွားခြင်းတို့သည်တူညီကြသည်၊ ငါသူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သင်၏စိတ်နှင့်နှလုံးကိုအလွန်ဝေးလံစွာယူသွားသည်ဟုထင်မြင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများကိုကမ္ဘာတဝှမ်းမျှဝေခြင်းနှင့်ခရီးသွားခြင်းအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဖြန့်ဝေရန်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအရာဖြစ်သည်။ အခြားမြို့များ၏ဓလေ့ထုံးစံများကိုလည်းသိထားသင့်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီပြaboutနာတွေအကြောင်းကိုအများပြည်သူထံချဉ်းကပ်စေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာကျေနပ်အားရမှုရပါတယ်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းကဘာသာစကားတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအသည်းအသန်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့အဲဒီကွဲပြားခြားနားတဲ့ဘာသာစကားများသို့မဟုတ်စကားမျိုးစုံကိုလေ့လာခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါတယ်။ ငါသွားသောခရီးစဉ်တစ်ခုစီသည်သင်ယူမှုအသစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တစ်သက်တာအတွက်မှတ်မိလိမ့်မည်။
စူစန်နာ Garcia က
ကြော်ငြာခြင်းတွင်ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး၊ ငါမှတ်မိနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးပုံပြင်များနှင့်နေရာအသစ်များကိုရေးသားလိုသည်။ ခရီးသွားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ် ၀ င်စားမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်နေရာများနှင့်ပါတ်သက်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။
သူတို့ကကမ္ဘာပေါ်မှာလူတွေလိုပဲခရီးသွားအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားနိုင်သောစိတ်ဝင်စားမှုအမျိုးမျိုးကိုသဘောပေါက်လာသည်။ ထို့ကြောင့် Actualidad Viajes တွင်သင်၏အားလပ်ရက်များကိုကမ္ဘာ၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်ရန်သင်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုငါပေးမည်။
ငါထင်တာကတော့ခရီးသွားခြင်းဟာလူတစ် ဦး အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အချမ်းသာဆုံးအတွေ့အကြုံတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ရှက်စရာ၊ ငွေအတွက်ဒီအတွက်လိုအပ်တယ်ဟုတ်လား။ ငါလိုချင်တယ်။ ငါဒီဘလော့ဂ်မှာခရီးစဉ်အမျိုးမျိုးအကြောင်းပြောမယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခုခုအတွက်အရေးကြီးပုံကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့ငါကံကောင်းထောက်မစွာလမ်းမလျှောက်ဘဲသွားရမယ့်နေရာတွေဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကအမြဲတမ်းခရီးသွားချင်ခဲ့တယ်၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့မမောနိုင်မပန်းနိုင်ခရီးသည်တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးနေရာများမှာအိန္ဒိယ၊ ပီရူးနှင့် Asturias တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာအားလုံးကိုဗွီဒီယိုတွင်ရိုက်ကူးခြင်းကိုသူသဘောကျသည်။ သူသည်ဂျပန်လူမျိုးကဲ့သို့ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ ငါသွားရောက်လည်ပတ်ရာ၏ရိုးရာ gastronomy ကြိုးစားနေငါ့ကိုအိမ်မှာလုပ်လူတိုင်းနှင့်အတူမျှဝေဖို့ငါ့ကိုချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများအနည်းငယ်ယူလာကြိုက်တယ်။